RAHARAHAM-PITSARANA : Kolonely iray tokony higadra anefa nahazo galona jeneraly | NewsMada
Ny jeneraly Tsivahiny Patrick, isan’ny voatonontonona amin’ny raharaha ity.
Taorian’ny fanadihadiana lalina nataon’ny mpanao gazety teto amin’ny Free News, fantatra amin’izao amin’ny alalan’ny taratasy navoakan’ny fitsarana laharana faha 100/Ma02 ny talata 14 Jona 2011, jeneraly iray mitondra ny anarana hoe Tsivahiny Patrick, lehiben’ny vondron-tobim-paritr’Antsiranana amin’izao fotoana no tokony namita ny saziny herintaona an-tranomaizina noho ny raharaha andramena saingy tsy nanatanteraka izany. Ny minisiteran’ny rano sy ny ala no nijoro ho mpitory azy sy ireo olona niaraka taminy tamin’ity raharaha ity…
Raharaham-pitsarana tamin’ny taona 2011 ity resahina ato amin’ny gazety androany ity. Raharaha mahasaringotra jeneraly Tsivahiny Patrick izay mitazona fibaikoana amin’izao fotoana izao. Araka ny didim-pitsarana nivoaka tamin’ny 14 jona 2011, sazy mihatra herintaona no azon’ity jeneraly ity tamin’izay fotoana izay. Izy izay tsy tonga nanatrika ny fitsarana tamin’io fotoana io.
Nanao fitrandrahana sy fanondranana ary fivarotana tsy ara-dalàna andramena nihazo an’i Anjuan, kaomaoro, izay sazian’ny andininy faha-49, andalana faha-2-69 ao amin’ny didim-panjakana tamin’ny 25 janoary 1930 no niampangana azy voalohany sy ny olona roa hafa niaraka taminy tamin’izany. Tamin’io fotoana io ihany, tamin’ny toerana mitovy, fanapahana, fitrandrahana ary fanondranana tsy ara-dalàna andramena sy hazo mainty izay sazian’ny andininy faha-59 ao amin’ny fehezan-dalàna famaizana sy ny andininy voalohany sy faharoa tamin’ny didim-panjakana 2010 141 izay nivoaka tamin’ny 24 marsa 2010 no niampangana azy ireo faharoa tamin’izany.
Nivoaka tamin’ity fitsarana ity ny didy nanameloka ity jeneraly ity, mbola kolonely izy tamin’izany fotoana, ary nanome sazy mihatra heritaona an-tranomaizina azy ny fitsarana. Noteren’ny fitsarana handoha honitra mitentina 1.402.995.000 ariary amin’ny amin’ny minisiteran’ny rano sy ny ala ary ny tontolo iainana ihany koa izy sy ny namany roa hafa.
Olona 12 no voapanga tamin’ity raharaha ity niakatra fitsarana tamin’io fotoana io, izay nahitana tantsambo miisa 6, vehivavy iray, olon-tsotra telo, teratany sinoa iray ary manamboninahitra zandary iray. Araka ny voasoratra ao anatin’ilay didim-pitsarana ihany, olona enina no tonga tamin’ny fakana am-bavany natao azy fa tsy nisy tonga kosa ny ambiny.
Andramena 40 taonina
Rehefa nanao fanadihadiana ny mpanao gazety teto amin’ny Free News dia nahazo ny fifanarahana ara-barotra nifanaovan’ity jeneraly (izay mbola kolonely tamin’izany fotoana) niaraka tamin’ny namany iray tamin’ny olona hividy ireo andramena ireo tamin’ny datin’ny 03 martsa 2010.
« Andininy voalohany : andramena avy aty Madagasikara 400 taonina no ifanaharana fa ho vidiana, izany hoe ao anaty kaontenera miisa 20. Raisin’ny sambo an-tànana ny fampidirana sy ny fanondranana ireo andramena ireo. Marihina fa 20 hatramin’ny 21 taonina ny ao anatin’ny kaontenera iray », hoy ny voasoratra ao anatin’io fifanarahana ara-barotra io.
Voasoratra ao anatin’ity fifanarahana ara-barotra nifanaovan’ny roa tonta ity avokoa ny kipitsopitsony mikasika ireo hazo rehetra. Toy ny hoe : 18sm ny haben’ny hazo, bolabola miisa 120 hatramin’ny 130 ny ao anatin’ny kaontenera iray.
Voamarika ao ihany koa ny fomba handoavan’ny mpividy ny entana ny vola vidin’izany. Aloa ao anatin’ny 15 andro aorian’ny nanaovana ny fanaovan-tsoniam-pifanarahana ny 40%-n’ny vola vidin’entana. Any Sina kosa no aloa ny 60% ambiny.
Amin’izao fotoana izao, mangina tanteraka ity raharaha ity, navalon’ny taona. Misy tamin’ireo olona tokony hisazy no tsy nanao izany saziny izany akory, isan’izany ny jeneraly Tsivahiny Patrick. Ity farany izay mbola isan’ireo nahazo ny laharan’ny jeneraly ihany ary mbola mitazony fibaikoana amin’izao fotoana izao. Ny tsy mazava, tsy fantatry ny eo anivon’ny fanjakana foibe ve ny fisian’itony atotan-taratasy itony sa misy antony hafa ao ambadika ao? Hatramin’izao ihany koa, tsy mbola nandoa honitra tany amin’ireo olona tokony hanaovana izany izy ireo, tsy honitra kely amin’izany fa vola mitentina 1.402.995.000 ariary be izao.
Miantso ny eo anivon’ny fanjakana foibe sy ny fitsarana manoloana izao trangan-javatra izao. Araka ny efa ambara ombieny ombieny mantsy dia hoe : tany tan-dalàna i Madagasikara ary tsy misy olona ambonin’ny lalàna izany.